Mety hisy ve ny firaisana raha tsy misy ny penetration? | Bezzia
Maria Jose Roldan | 08/04/2021 04:59 | ara-pananahana
Hatramin'izao dia mbola manjaka hatrany ny finoana malaza fa raha tsy misy ny fidirana dia tsy misy ny firaisana. Zava-dehibe ny manilika ny hevitra toy izany ary mieritreritra fa misy ny firaisana ara-nofo rehefa misy ny safosafo, ny filokana na ny firaisana amin'ny vava eo amin'ny samy olona.
Tokony hanana saina misokatra bebe kokoa ianao ary hadinoy ny zava-misy fa misy ihany ny firaisana raha toa ka afaka miditra amin'ny vehivavy mandritra ny firaisana ny lehilahy. Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia manome anao fanalahidy vitsivitsy izahay hahazoana antoka fa mety hisy ny fanaovana firaisana na dia tsy misy aza ny fidirana.
1 Mety hisy ny firaisana raha tsy misy ny fidirana
2 Ny fahasarotan'ny firaisana ara-nofo
3 Fanabeazana amin'ny lahy sy ny vavy
Mety hisy ny firaisana raha tsy misy ny fidirana
Soa ihany fa mihamaro ny olona mahatsiaro tena mieritreritra fa mety hanao firaisana na dia tsy tonga aza ny fidiran'ny olona. Izany fisainana izany dia miseho betsaka kokoa amin'ny vehivavy noho ny an'ny lehilahy. Ny olona iray dia afaka mankafy fiainana firaisana ara-nofo somary mavitrika na eo aza ny tsy fisian'ny karazana fidirana anaty.
Ny fampianarana ratsy momba ny firaisana ara-nofo voaray dia mahatonga olona marobe, ny fidiran'ny filahiana amin'ny fivaviana dia toa zavatra terena hoheverina ho firaisana. Ity fanabeazana ity dia manome safidy bebe kokoa amin'ny fahafinaretan'ny lehilahy noho ny an'ny vehivavy, noho izany dia azo heverina ho macho tanteraka izy io.
Ny fahasarotan'ny firaisana ara-nofo
Ny zava-misy fa ny firaisana ara-nofo dia mihena hatramin'ny fidirana an-tsokosoko koa dia misy ifandraisany amin'ny fiheveran'ny maro an'isa fa tokony heterosexual ny olona. Ataovy ao an-tsaina fa ny firaisana ara-nofo dia sarotra kokoa ary mety hisy ny firaisana ara-nofo feno sy mahafa-po nefa tsy miditra na orgasme. Ny fihetsika ara-nofo dia tsy tokony hahena amin'ny fampidirana ny filahiana amin'ny fivaviana.
Ny lakilen'ny rehetra amin'izany dia tsy maintsy tadiavina amin'ny hevitry ny vehivavy. Betsaka ny fandalinana milaza fa aleon'ny vehivavy ny fanaovana firaisana fa tsy ny fidirana. Mahalana ny vehivavy no afaka mankafy firaisana ara-nofo raha vao miditra amin'ny lahy izy. Mila andianà fomba fanao iray hafa izy ireo hahafahana mifaly sy mankafy mandritra ny fihetsika mamoafady.
Fanabeazana amin'ny lahy sy ny vavy
Nomena an'ity, zava-dehibe ny hahafahana manabe indray amin'ny sehatry ny firaisana ara-nofo na vehivavy na lehilahy. Tokony ho fantatry ny olona amin'ny fotoana rehetra ny fahafaha-manao firaisana lehibe ananan'ny olombelona. Ny firaisana dia tsy fidirana fotsiny ary misy fomba maro hafa hankafizana ao am-pandriana tsy hidirana. Mandra-pitrangan'ny fanabeazana toy izany dia olona maro no hanohy hieritreritra fa ny firaisana dia tsy misy raha tsy misy ny fidirana. Ilaina ihany koa ny fifandraisana tsara amin'ireo mpivady mba hahafahana miresaka zavatra tsy misy fanafenana ary hahafantarana ny fahafinaretan'ny olona roa kokoa eo am-pandriana.
Raha fintinina, mazava be fa raha misy ny firaisana, tsy ilaina ny fidiran'ny olona. Ny firaisana ara-nofo dia malalaka kokoa ary misy fomba maro hankafizanao eo am-pandriana miaraka amin'ny vadinao, na dia tsy tafiditra aza izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » ara-pananahana » Mety hisy ve ny firaisana raha tsy misy ny penetration?
Boky 5 momba ny fitiavan-tanindrazana navoaka tamin'ny taona lasa